yu-gi-oh! duel links ကဒ်ဂိမ်းသည် android နှင့် ios ထုတ်ကုန်များတွင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်ရှိသည်
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ Yu-Gi-Oh! Duel Links ကဒ်ဂိမ်းသည်ကမ္ဘာနှင့်အ ၀ ှမ်း Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်
Yu-Gi-Oh! Duel Links ကဒ်ဂိမ်းသည်ကမ္ဘာနှင့်အ ၀ ှမ်း Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်
KONAMI သည်၎င်း၏လူသိများသော Yu-Gi-Oh ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ Duel Links ယှဉ်ပြိုင်ကဒ်ဂိမ်း ယခုအခါနိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်တွင်ရရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းကိုဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်တွင်စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည် App Store နှင့် Google Play တွင်ဒေါင်းလုပ် (၉) သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဂျပန်ထုတ်ဝေသူ၏အဆိုအရဂိမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လွှတ်မှုသည်မြောက်အမေရိက၊ အာရှနှင့် Oceania ဒေသများမှဖြစ်ပြီးဥရောပ၊ တောင်အမေရိကနှင့်အာဖရိကဒေသများမှစတင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်တရုတ်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့တွင်ကစားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
Yu-Gi-Oh! Duel Links တစ်ခုတည်းနှင့် multiplayer mode ကိုနှစ် ဦး စလုံးပါရှိပါတယ်။ ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကကစားသမားတွေကို Yu-Gi-Oh ကနေသူတို့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ပြိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆုအမျိုးမျိုးရရှိရန်အတွက်စင်မြင့်မစ်ရှင်များကိုပြီးဆုံးသည်။
ဂိမ်း၏မုန့်နှင့်ထောပတ်မည်သို့ပင်ဆိုစေသည် အွန်လိုင်း PvP Duels တွင်ကစားသမားများသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိအခြားကစားသမားများနှင့်အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးထိတွေ့နိုင်သည်။
သူတို့က In- ဂိမ်းစုဆောင်းကဒ်များကိုအသုံးပြု။ ကစားသမားပြိုင်ဘက်အပေါ်ယူ၎င်းတို့၏ကုန်းပတ်တည်ဆောက်ရန်နှင့်တည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်အသစ်တွင်ကဒ်အသစ်များလည်းရနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ကုန်ကျသည်။
Yu-Gi-Oh! Duel Links များကို Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များတွင်အခမဲ့ရနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် in-app ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် KONAMI & apos; s ဂိမ်းတွင် Android 4.4 သို့မဟုတ် iOS 8.0 နှင့်အထက်ရှိစက်များလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
Yu-Gi-Oh! Android အတွက် Duel Links များ
ရင်းမြစ် - Konami , Google Play , အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး
ဒေတာဗေ့စ်တစ်ခုမှဒေတာများကိုဖျက်ရန်မည်သည့် sql ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအသုံးပြုသနည်း။
galaxy s5 အတွက်အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်အမှု
ဤတွင်တရားဝင် Galaxy Note4ကိစ္စများဖြစ်ကြသည်
Samsung Galaxy Z Fold2နှင့် Galaxy Note 20 Ultra: ဂန္ထဝင်နှင့်စကြဝvsာကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်
Bluetooth နားကြပ်ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ Plantronics BackBeat Go2သည်ဒေါ်လာ ၃၉.၉၉ ဖြင့်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်
Best Buy နှင့် Amazon သည်အလွန်ကောင်းမွန်သော Samsung Galaxy Watch Active ရှိသည်
Apple iPhone 12 / Pro 18W နှင့် 20W vs 5W vs MagSafe adapter အားသွင်းမြန်နှုန်း
၉.၇ လက်မအိုင်ပက်ဒ် (နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်) ကို ၃၂ နှင့် ၁၂၈ ဂစ်ဂါဘရပ်များမှ Best Buy တွင်ရောင်းချခဲ့သည်
ဤနေရာတွင် apos; မေးခွန်းများနှင့်အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ပြောမည့်အစားသင်၏မေးခွန်းများနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုသင်မည်သို့စာရိုက်ရမည်ဆိုသည်ကိုဖော်ပြထားသည်
iPhone ရောင်းအားကျဆင်းသော်လည်းအက်ပဲလ်သည် Samsung နှင့် Huawei တို့ကဲ့သို့ Q2 တွင်ငွေများစွာနီးပါးရရှိခဲ့သည်
ခြစ်ရာကိုသတိပြုပါ - Galaxy S7, S7 အစွန်းအိမ်ခလုတ်များသည်ပျက်စီးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်
သင့် iPhone7Plus: Portrait Mode ၏အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံတူများကိုယူပါ